Previous Article Buhari Ji Ala Naijiria n'Ọrụ -- Ndi Na-eme Ngagharị Iwe
Next Article Gọọmenti Bornu na-agwa ndị gbara ọsọ ọgụ ka ha wetuo obi ha ala
Gọọmenti ala Naịjirịa ekwuola na Ọ na–agba mbọ niile O nwere ike maka ịdọta ndị oji ego achụ ego n’ala Naịjirịa.
Onye minisita ala Naịjirịa na–ahụ maka Naịjirịa ọrụ ugbo na mmepe ime ime obodo bụ Maazị Audu Ogbeh kwuputara nke a mgbe Ọ gwara ndị nta akụkọ okwu gbasara ọgbakọ ya na ndị oji ego achụ ego si mba Jamini nwere.
O kwuru na ndị oji ego achụ ego nwere mmasị ịbata ala Naịjirịa na-enwe obi ịlọ mmiri gbasara ọnọdụ nchekwa E nwere na Naịjirịa, kaosinadị onye minisita a kwere ha nkwa na gọọmenti dị njikere ịchekwa ndụ na akụnụba ndị niile bi na Naịjirịa
Maazị Ogbeh kwukwara na ụlọ ọrụ ya na-ehibe atụmatụ iwu nke ga–eme ka ya na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịhe na-eme n’ala Naịjirịa jikọọ aka ọnụ iji chekwawa ndị na-etinye ego na ngalaba azụmahịa.
Ọ kọwapụtakwara ịhe ndị ha kpatara na nzukọ ya na ụlọ ọrụ A kpọrọ Food and Agriculture Organisation n’olu bekee n’obodo Rome nke mba Italy.
O mere ka A mata na E hiwere yabụ ọgbakọ iji lebaa anya n’okwu metụtara ọnọdụ mbawanye n’ọnụ ọgụ ndị mmadụ nakwa nchekwa ihe oriri.
Onye minista a gwara ndị nta akụkọ ka ha sonye n’ịgbasara ọha na eze ozi iji kọwatara ha mkpa Ọ dị ịhụ na ndị mmadụ na-eri erimeri ndị ahụ nwere ịhe ahụ ha chọrọ.